09/15/13 ~ Myanmar News Updates
ခလရ(၁၃၇)မှ ဖြစ်ရပ်မှန် ဘယ်သူများလဲ ??
10:09:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ယခုအပတ်တွင် KIA မှ စစ်တပ်မှ အရာရှိတစ်ဦးနှင့် ရဲဘော် (၂) ဦးကို ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းဖြတ် သတ်မှုသတင်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးမှုတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားမှုမှာ ခလရ(၁၃၇) က ဗိုလ်ဇော်မျိုးထက်အပါအ၀င် (၁၂) ဦးက တောင်တက်အဖွဲ့ကို လုံခြုံရေး လိုက်ပေးရင်း KIA က မလွမ်ဒိန်စာရွာ အနီး မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်ဘက်က (၂)ယောက်သေပြီး (၁)ယောက်ထိခိုက် ကာ KIA ဘက်က (၁) ယောက်သေပါတယ်။ တောင်တက်အဖွဲ့အား အင်ခဂါးရွာသို့ ဆက်လက်ပို့ဆောင်စဉ် KIA မှ အင်အား (၃၀)ကျော် နှင့် စစ်တပ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များအား ခြုံခိုတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အင်အားခြင်းမမျှတတာကြောင့် စစ်တပ်က ပြန်ဆုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ဇော်မျိုးထက် မပါလာကြောင်း သူ့အဖွဲ့က သိရှိရပါတယ်။
ခလရ(၁၃၈)မှ အဖွဲ့က ဗိုလ်ဇော်မျိုးထက်ကို ထပ်မံရှာဖွေခဲ့ရာ ဒီလ (၅) ရက်နေ့မှာ အင်ဒဂါးရွာအနီးတွင် ဦးခေါင်းပြတ်ပြီး မြေမြှုပ်ထားကြောင်း ရွာသားများ၏ ပြောဆိုမှုအရ အလောင်းအားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
မျက်မြင် တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ ရွာသားတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရ စစ်တပ်က အရာရှိကို KIA က ဖမ်းလာခဲ့ပြီး ရွာအနောက်ဘက် တောအုပ်မှာ ခေါင်းဖြတ်သတ် ခဲ့တာပါ။ ခေါင်းဖြတ်သတ်တာ အရင်တုန်းက KIA တွေတစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဖြတ်တဲ့ လူပုံကလဲ ကုလားနဲ့ဆင်ပြီး ကချင်လူမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကုလားတွေ KIA ထဲရောက်လာလို့ ခုလိုဖြစ်ရတာ၊ အစိုးရ တပ်ကပဲ တောင်တက်အဖွဲ့ကို လုံခြုံရေးလိုက်ပေးရင်းနဲ့ ခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေစဉ် အတောအတွင်းမှာ ခုလို KIA က စစ်ပွဲမှာဖမ်းမိတဲ့ အရာရှိကို ခုလို ရက်ရက် စက်စက်သတ်ဖြတ်တာကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ ငါတို့ အားလုံးလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ KIA ကအခုလို ရန်သူကို လူမဆန် သလို လုပ်တာတော့ ငါတို့လည်း မကြိုက်ဘူး ဟု အင်ခဂါးရွာသားတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ပျံ့နှံ့နေတဲ့သတင်းတွေက အရာရှိကို ခေါင်းဖြတ်နှိပ်စက်တာကို သူ့ရဲဘော်တွေကိုကြည့်ခိုင်းပြီးမှ ကျန်တဲ့ ရဲဘော်တွေကို နောက်မှ ခေါင်းဖြတ်သတ်မယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေ အမျိုးမျိုးပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရာရှိကိုသာ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ရဲဘော် (၂)ဦးက တိုက်ပွဲမှာသေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဖမ်းမိတဲ့ ရန်သူကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်မှုကို ကျွန်တော်တို့တွေလည်းလက်မခံသလို ဘယ်သူမှ လည်းလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်တာကြောင့်မို့ ပိုဆိုးဝါးပေမဲ့ အစိုးရဘက်က သဘောထားကြီးစွာထားပြီး လုပ်ဆောင် သင့်ပါတယ်။ ပျံ့နှံ့နေတဲ့သတင်းတွေကို သေချာ လေ့လာပြီးမှယုံကြည်ကြပြီး အဖြစ်မှန်ကိုသိရှိဖို့ ဖော်ပြလိုက်ရ ပါတယ်။
ကဲ့ စဉ်စားသာကြည့်ကြပါတော့....ဘယ်သူမှား( ) ဘယ်သူ( )
10:02:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဒါပေမယ့် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိတဲ့ ထောင်ထွက်လူဆိုးတစ်ယောက် ရွာပြန်လာပြီး လူကောင်းအဖြစ် ဟန်ဆောင် ရင်းကနေ သရုပ်မှန်ပေါ်တတ်တဲ့ သဘောသဘာဝကိုတော့ ရွာတစ်ရွာမှာ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်က နယ်မြို့တစ်မြို့နဲ့ မဝေးတဲ့ ရွာတစ်ရွာမှာ ကျောင်းဆရာအဖြစ် တာဝန်ကျပါတယ်။ အဲဒီရွာမှာ တစ်ရွာလုံး အော့ကြောလန်တဲ့ လူဆိုးလူမိုက်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ မိဘတွေက ကြေးရတက်တွေဆိုတော့ ရွာမှာ အရှိန်အ၀ါ ရှိတယ်၊ အဲဒီလူမိုက်ကလည်း မိဘမျက်နှာနဲ့ တစ်ရွာလုံး ဘယ်သူ့မှ လူထင်တာမဟုတ်ဘူး။ တစ်နေ့ အဲဒီ လူမိုက်ဟာ ရွာပြင်က ထန်းတောမှာ မူးရူးရမ်းကားပြီး လူသတ်မှုဖြစ်လို့ ထောင်ကျသွားတယ်၊ ကံကောင်းချင် တော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ရွာမှာ လူကြီးလူကောင်းပုံစံနဲ့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ တစ်ရွာလုံး အံ့အားသင့်ကုန်ကြတာပေါ့။ အဖေဆုံးသွားတော့ အမေကပဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လုပ်ရင်း ထောင်ထွက်သားကို နေရာပေးတယ်။ ရွာအတွက် အလှူအတန်းတွေလုပ်ပြီး လိုအပ်တာမှန်သမျှ အကုန်လုပ်ပေးရာကနေ ရွာမှာ မျက်နှာပွင့် ဂုဏ်တက်ပြီး သားထောင်ထွက်ကိုလည်း ရွာက လက်ခံလာကြတယ်။ သူ့ကို အမေလုပ်သူက လူဝင်ဆန့်အောင် ရယ်ဆိုပြီး ရွာက လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထဲမှာ နေရာတစ်နေရာရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ အမေ့မျက်နှာနဲ့ တစ်ရွာလုံးက သူ့ကို ယုံကြည်ပြီး အဲဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ငွေထိန်းတာဝန်ပေးလိုက်တယ်။
မြို့သူမြို့သားအားလုံးနီးပါးက ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို ယုံကြည်ထောက်ခံလိုက်လို့ မြို့နယ်ပါတီတစ်ခုရဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ရာထူးထိ ရခဲ့ပါတယ်။ မြို့နယ်အတွက် ဘာတွေ ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီး အာပေါင်အာရင်း သန်သန်နဲ့ ပြောသွားတဲ့ စကားတွေမှာ မြို့သူမြို့သားတွေ နစ်မျောခဲ့ကြတယ်။ ဟော. အခု နေရာလည်းရရော ကိုယ့်မြို့သူမြို့သားတွေကို စော်ကားလိုက်ပြီ၊ ဒီတော့ မြို့သူမြို့သားတွေ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေကြပြီလေ၊ အဲဒီ ရာထူးနဲ့ မထိုက်တန်ပါဘူး၊ ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုမယ်ဆိုပြီး လက်မှတ်တွေ လိုက်ထိုးနေတာ ကျွန်တော် တွေ့နေရပါတယ်။ မြို့သူမြို့သားတွေက ပင့်ပေးလိုက်လို့ အမြင့်ရောက်သွားကာမှ အောက်ကို တံတွေး ထွေးတတ်တဲ့အကျင့် ဒါမှမဟုတ် စော်ကားမောက်မာတဲ့ အကျင့်မျိုးရှိတဲ့ လူဖျက်ဟာ အချိန်တန်တော့လည်း သရုပ်မှန်တွေ ပေါ်လာတယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းနားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကတည်းက သတင်းထွက်နေတာ ကြားရပြန်ပါတယ်။ ဂျာနယ် တစ်စောင်အတွက် သိန်း ၁၈၀၀ အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်နေလို့ အဖွဲ့ဝင်တွေ အချင်းချင်း တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် အပြစ်ဖို့နေကြပြီး အဲဒီပါတီအပေါ် ပြည်သူရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေလည်း လျော့သွားပြီလို့ အသံတွေ ထွက်နေပါတယ်။ အဲဒီသတင်းမှန်ခဲ့ရင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကိုယ်စား ယုံကြည်လို့ တာဝန်ပေးအပ်တာကို နေရာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရင် အလွဲသုံးစားလုပ်တတ်တဲ့ သရုပ်မှန်ပေါ် လာတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေဟာ အပြုသဘောသက်သက်ပါ။ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ ပုတ်ခတ်ဝေဖန်စော်ကားခြင်း ဆန္ဒလုံးဝမရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့က ကြားနေလူတန်းစား အစိုးရကျောင်းဆရာ တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံကောင်းစားတာကိုတော့ မြင်ချင်တွေ့ချင် ပါတယ်။ ဒီတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ နိုင်ငံကိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ အများကြီး လိုအပ်နေပါပြီလို့ မြင်မိပါတယ်။ အများစု အထင်ကြီးနေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဆိုတာကလည်း အချိန်တန်တော့ သရုပ်မှန်တွေ ပေါ်လာတတ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အများပြောနေတဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ဘယ်သူ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေ တာဝန်ယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့ အဖြေဟာ လည်း အင်မတန်အရေးကြီးလာပါပြီ။ နေရာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရင် တိုင်းပြည်ကိုတောင် ရောင်းစားမယ့် လူတွေ လက်ထဲ မှာတော့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ၀ ကွက် မအပ်ချင်တာအမှန်ပါ။
အချိန်တန်လို့ သရုပ်မှန်တွေ ပေါ်လာပြီ… အထက်မှာပြောခဲ့သလို ထောင်ထွက် လူမိုက်ကို ငွေထိန်းထားမိလို့ အလွဲသုံးစားဖြစ်တာက ငွေလျော်ခိုင်းပြီး အဖွဲ့ထဲက ထုတ်ပစ်လို့ရတယ်၊ ရွာလည်း မနစ်နာပါ၊ ကောင်းမယ် ထင်လို့ အများက ၀ိုင်းပြီး ထောက်ခံပေးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို မကျေနပ်လို့ ရာထူးတွေ ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာကလည်း အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲ နစ်နာရုံကလွဲပြီး မြို့နယ်တစ်ခုလုံး မနစ်နာနိုင်ပါ၊ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ တစ်ခုလုံးကို အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ လက်ထဲမှာ ယုံယုံကြည်ကြည် အပ်မိလို့ မှားသွား ရင်တော့ တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးအတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကြီးမားပြီး ဘ၀ပါ ပျက်ရမှာပါ၊ ဒီတော့ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကို အားကိုးယုံကြည်ရမလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို ကိုယ်တိုင်အသိတရား ကိုယ်စီနဲ့ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်တွင် စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေ SNDP ပါတီ ထည့်သွင်း
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP) ၏ အခြေခံဥပဒေပါ ပြင်ဆင်လိုသည့် အချက် ၁၀၀ ကျော်တွင် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးသည့် နိုင်ငံသားတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ပြဋ္ဌာန်းချက် ပါဝင်ကြောင်း အဆိုပါ ပါတီဝင် ဦးစိုင်းသီဟကျော်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတစ်ခုတွင် တပ်မတော်နှင့် ပြည်သူလူထု တစ်သားဖြစ်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ထည့်သွင်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“စစ်သားဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတန်းစားတစ်ရပ်လို ဖြစ်နေတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်များတွင် ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ကို ပြည်နယ်က ရွေးချယ်ခွင့်ရှိရေး၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များကို အစိုးရ အဖွဲ့တွင်းမှ လျှော့ချရေးစသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသော အချက်များကို ထည့်သွင်း ပြင်ဆင်ထားသော အချက် ၁၀၀ ကျော် ပါရှိကြောင်း ဦးစိုင်းသီဟကျော်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အချက်များကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပေးထားသော အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မတီသို့ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသည်။
အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီက ဇူလိုင်လအတွင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကလည်း အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီကို စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
9:20:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
မုန့်ဟင်းခါး တုံယမ်း ပါဝါအပျော့
ပုဂံဘုရားများနှင့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ များကို ရှေးမူမပျက် စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာ့အမွေအနှစ် များကို ထိန်းသိမ်းပါမည့် အကြောင်း ဆောင်းပါး ရေးလိုက်သည့်အခါတွင် ဖတ်ရှုရသည့် Facebook မှ မိတ်ဆွေ တစ်ဦးက ထိုင်းတုံယမ်းက ကမ္ဘာကျော်ပြီး မြန်မာမုန့်ဟင်းခါးက ဘာကြောင့် ကမ္ဘာမကျော်သလဲဟု မေးခွန်းထုတ်လာသည်။
သူပြောလျှင်လည်း ပြောစရာ။ ထိုင်းတုံယမ်းခေါ် ထိုင်းချဉ်စပ်ဟင်းရည် သည် CNN က ထုတ်လွှင့်သော ကမ္ဘာ့အရသာအရှိဆုံး အစားအသောက် ၅၀ စာရင်းတွင် နံပါတ် ၈ နေရာတွင် ချိတ်သည်။ ထိုင်းသင်္ဘောသီးထောင်းက နံပါတ် ၄၆ တွင် ချိတ်သည်။ တုံယမ်းဟင်းရည်သည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင်ပင် ထိုင်းဆိုင်ဟုတ်သည်ရော၊ မဟုတ်သည်ရော စားသောက်ဆိုင်အတော် များများတွင် ရနိုင်သောဟင်းရည် ဖြစ်လာသည်။ ယခင်က စားသောက်ဆိုင် တို့တွင် ငါးခေါင်းဟင်းရည်၊ ဆယ့်နှစ်မျိုး၊ ဆွမ်တန်တို့သာ ရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ တုံယမ်းသည် မပါမဖြစ် ဖြစ်လာသည်။ တုံယမ်းနှင့် သင်္ဘောသီးထောင်းသည် ထိုင်းအစားအစာထဲတွင် နာမည်အကျော်ဆုံး အစားအစာများဖြစ်ပြီး သူတို့ သာမက ထိုင်းစာများသည် ကမ္ဘာတွင်လည်း နာမည်ကျော်သည်။ ရိုးရာ အစားအစာဟု ဆိုလိုက်လျှင် လူအများသည် အီတလီ၊ ပြင်သစ်နှင့် တရုတ် ပြီးလျှင် ထိုင်းကို စိတ်ထဲရောက်ကြသည်ဟု သုတေသနတစ်ခုက ဆိုသည်။
မြန်မာမုန့်ဟင်းခါးက ထိုင်းတုံယမ်းလောက် နာမည်မကြီးခြင်းတွင် အကြောင်းများစွာ ရှိနိုင်သည်။ နံပါတ်တစ်အဖြေက မြန်မာကို ကမ္ဘာက မသိ၊ ထိုင်းကို ကမ္ဘာက သိသည်။ ယခု မြန်မာကိုသိလာပြီ မဟုတ်လောဟု မေးကြမည်။ ဟုတ်ပါသည် ယခင်ကထက်စာလျှင် သိလာပါပြီ။ သို့သော် ထိုင်း လောက်မူ မသိကြသေးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကပါဟု မိတ်ဆက်လိုက်လျှင် “ဟုတ်ကဲ့” ဟု အားနာပါးနာဖြင့် ဖြေသော်လည်း ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေသူများ မကြာခဏ တွေ့ရလိမ့်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို သိသောသူ သည်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လောက်သာ ကြားဖူးကြသည်။ မြန်မာပြည် ဘယ်နားလဲဆို မသိ။ ထိုင်းနှင့်ကပ်လျက် ဆိုမှ “သြော်” ဆိုပြီး သိကြပြီ။ နိုင်ငံကို ကမ္ဘာကပင် မသိမှတော့ မြန်မာ့အစားအသောက် မုန့်ဟင်းခါးကို ဘယ်သိကြ ပါ့မလဲ။
နောက်အဖြေတစ်ခုက ထိုင်းကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း။ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖွံ့ဖြိုးဆုံး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံ များထဲတွင် ပါဝင်သည်။ လာမည့်နှစ် ၂၀၁၄ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာလှည့် ၂၈ သန်း လာလည်မည်၊ ခရီးသွားနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများမှ ဒေါ်လာ ၄၄၀ ဘီလီယံ ရမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ထိုဧည့်သည်များသည် ထိုင်းအစားအသောက်များကို မြည်းစမ်းကြည့်ပြီး သဘောကျသူက ကျသွားကာ အခြားသူများထံသို့ သတင်းစကား လက်ဆင့်ကမ်းသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတွင်း ကွန်မြူနစ်ရန် ကာကွယ်ရန် အမေရိကန်စစ်စခန်းများ ထိုင်းတွင် အခြေစိုက်ရာမှ ထိုင်းအစားအသောက်များကို စွဲလမ်းသွားသည်လည်း အများအပြား ရှိသည်။ ထိုင်းကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ထိုင်းအစားအစာသည် ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အပြန်အလှန် အကျိုးပြုသည်။
နိုင်ငံခြားရောက် ထိုင်း၊ နိုင်ငံခြားတွင် အခြေစိုက်နေထိုင်သူ ထိုင်းများ သည်လည်း ထိုင်းအစားအစာကို ဖြန့်ဖြူးသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုင်းလူမျိုးများ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ သွားရောက်နေထိုင်သည့် အရေအတွက် များလာသည် နှင့်အမျှ ထိုင်းတို့သွားလေရာ နောက်သို့ ထိုင်းအစားအစာ ကောက်ကောက် ပါအောင် လိုက်သဖြင့် ထိုင်းအစားအစာသည် ကမ္ဘာတစ်လွှားသို့ ပျံ့နှံ့သွား သည်။ ယခုအချိန်တွင် ထိုင်းစားသောက်ဆိုင် များသည် ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ထောင်နှင့်ချီ ရှိနေပြီး ထက်ဝက်ခန့်မှာ အမေရိကတွင် ရှိသည်။
ထိုင်းအစားအသောက်များ နာမည်ကျော်ရခြင်းသည် ထိုင်းတို့ ဈေးကွက်တင် အနုပညာ အားကောင်းခြင်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ ထိုင်းတို့သည် ကြော်ငြာကောင်းသည်၊ အထုပ်အပိုး ကောင်းသည်။ အရည်အသွေး ချင်းတူလျှင် ထိုင်းပစ္စည်းက ပိုကောင်းသည် ထင်အောင် လုပ်တတ်သည်။ ထိုင်းတို့သည် မြန်မာတို့ထက် အစစအရာရာ နှစ် ၃၀ ခန့် ရှေ့ရောက်နေပြီ ဖြစ်ရာ ဈေးကွက်တင်ခြင်း တွင်လည်း အဆင့်မြင့်နေကြပြီ။ စီးပွားရေး ထုထည်လည်း ကြီးမားနေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံခြားသားတို့ သိအောင်၊ အထင်ကြီးအောင် လုပ်တတ်ကိုင်တတ်သည်။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်နိုင်ငံသား လျှာအကျင့်ပါပြီးသူ များသာမက ယခုမှ မြည်းစမ်းမည့်သူများ စားနိုင်အောင် အံကျစီမံနိုင်ခြင်း။ ဟင်းလျာ ပူပူစပ်စပ်များကို လျှော့ထားခြင်းဖြင့် ပူသေးစပ်သေးသော်လည်း နိုင်ငံခြားသားများ ခံနိုင်ရည်ရှိကာ အကြိုက်တွေ့သွားမည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ဆက်စပ်သည့် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ဖောက်သည်ချ လိုပါသည်။ ထိုင်းသို့ လုပ်ငန်းကိစ္စနှင့် ပြန်ရောက်သည့်အခါ ထိုင်းပြင်ပ နိုင်ငံခြားတွင် ခင်ခဲ့သည့် သူငယ်ချင်းမ တစ်ဦးနှင့် ပြန်တွေ့စားသောက်ကြရန် ချိန်းကြသည်။ ကျွန်တော် ထိုင်းတွင် တစ်နှစ်ခန့် ကျောင်းတက်ခဲ့ကြောင်း သိထားသည့် သူငယ်ချင်းမက သာမန်ထိုင်းဆိုင်သို့ ခေါ်မသွား။ “နင့်ကို ထိုင်းဆိုင်စစ်စစ် ခေါ်သွားမယ်”၊ ကျွန်တော်က “အေးပေါ့” ဟု ဘာမှ မထူးဆန်းသလို ပြန်ဖြေ သည့်အခါ သူက “အခုခေါ်သွားမှာက နိုင်ငံခြားသားတွေစားတဲ့ ထိုင်းဆိုင် မဟုတ်ဘူး။
ထိုင်းတွေစားတဲ့ ထိုင်းဆိုင်။ တကယ့် ပူပေ့စပ်ပေ့ဆိုတာတွေ ပါလိမ့်မယ်” ရှင်းလည်းရှင်းပြ၊ ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုလည်း အကဲက ခတ်လိုက်သေး။ သူခေါ်သွားသည့်ဆိုင်က ထိုင်းတွေချည်း တရုန်းရုန်း။ စားကြည့်တော့ ဟုတ်ပါ့၊ တကယ်စပ်သည်။ ငရုတ်သီးစပ်စပ် စားနိုင်သော ကျွန်တော် သူတို့နှင့် အပြိုင်စားနိုင်သော်လည်း စပ်ကြောင်းကတော့ ဝန်ခံရသည်၊ တရှူးရှူးနှင့်။ “ဟင်းထပ်မှာပါဦးလား”။ အစားအသောက်စာရင်းကို ကြည့်ပြီး စားကောင်းမည့်ပုံရှိသည့် မျှစ်နှင့် ကြက်သားချက် မှာလိုက်သည်။ “ဒါက တကယ်စပ်တယ်နော်။ တို့ထိုင်းတွေတောင် သိပ်မစားနိုင်ဘူး”။ ဟုတ်ပါသည်၊ ထိုဟင်းနှင့်ကျတော့ တစ်ဝက်လောက်နှင့် လက်မြှောက်လိုက်ရသည်။
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက မျှစ်နှင့် ကြက်သားဟင်းအကြောင်း မဟုတ်။ ထိုင်းတို့သည် သူတို့၏ ဟင်းလျာကို နိုင်ငံခြားသားလျှာ နှင့်လည်းတွေ့၊ ထိုင်းအရသာလည်း မပျောက်အောင် စီမံထားကြ သည့်အကြောင်း ပြောလိုရင်းသာ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အချို့ နာမည်ကြီးဆိုင်များတွင် နိုင်ငံခြားသားနှင့် လိုက်ဖက်အောင် ဆီလျှော့၊ ဆားလျှော့၊ အစပ်လျှော့ စီမံလာကြ သည်ကို တွေ့ရသည်။
ထိုင်းအစားအသောက်တို့ အောင်မြင်ရခြင်းတွင် အစိုးရ၏ အခန်းကဏ္ဍ သည်လည်း ကြီးမားသည်။ ထိုင်းအစားအသောက် နိုင်ငံခြားတွင် ပေါက်အောင် အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က လူစိုက်၊ အကြံဉာဏ်စိုက်၊ ငွေစိုက် ပံ့ပိုးသည်။ အထူးသဖြင့် ယခင်ဝန်ကြီးချုပ် သက်ဆင်လက်ထက်တွင် “ထိုင်းသည် ကမ္ဘာ့မီးဖိုချောင်” (Kitchen of the World) ပန်းတိုင်ကို ချမှတ်ကာ ထိုင်း အစားအစာကို နိုင်ငံတကာတွင် မြှင့်တင်ရန် အားထုတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းစားသောက်ဆိုင် ကမ္ဘာတွင် ဆိုင်ပေါင်း နှစ်သောင်းဖြစ်အောင် ရည်မှန်းချက်ထားခဲ့သည်။
ထိုင်း အစားအသောက်တွင် ထည့်ရသည့် ပစ္စည်းများ နိုင်ငံရပ်ခြား ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်များသို့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရောက်အောင် ထိုင်းလေကြောင်းက ကူညီသည်။ ထိုင်းအစားအစာကို မြှင့်တင်ရာတွင် ထိုင်းအစိုးရသည် စံချိန်စံညွှန်းနှင့် အရည်အသွေးတို့ကို ဂရုပြုသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့မှ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင် များအနက် အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ရှိဆိုင်များကို ဆုများချီးမြှင့်ကာ ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိအောင် ဆွဲဆောင်သည်။
ထိုင်းအစားအစာသည် ထိုင်း (Thainess) ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ထိုင်းအစားအစာသည် ထိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ မျက်နှာဖြစ်သည်။ ထိုင်းအစာ အစာကို စားသောက်ခြင်းသည် ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုနှင့် စတင်ထိတွေ့ခြင်း ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကမ္ဘာအနှံ့ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်များတွင် ထိုင်းစာ စားရင်း ထိုင်းဂီတ တေးသံများကို နားဆင်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားသည်။ ထိုင်းလက်ရာ ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊ စားပွဲခင်း၊ ပန်းချီတို့ဖြင့်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ ရောက်ပြီး စားသောက်နေရသည့်အလား ခံစားရအောင် စီမံထားခြင်းဖြင့် ထိုင်းယဉ်ကျေးမှုကိုပါ တစ်ပါတည်း စားသုံး ကြည်နူးစေသည်။
ထိုင်း အစားအသောက်တို့ ပေါက်မှ ထိုင်းတည်းဟူသော အမှတ်တံဆိပ် ပေါက်ပြီး ကျန်သော ထိုင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်း များလည်း တစ်နွယ်ငင်တစ်စင်ပါ လူကြိုက်များ ရောင်းအားတက်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲ များတွင်လည်း ထိုင်းလယ်ယာ ထွက်ကုန်၊ စက်မှုထွက်ကုန် များနှင့်အတူ ထိုင်းအစားအစာကို တည်ခင်းပြသ ဧည့်ခံကျွေးမွေးသည်။
ယဉ်ကျေးမှုသည် လူတို့၏ စိတ်အာရုံကို လွှမ်းမိုးနိုင်သော ပါဝါအပျော့ (Soft Power) ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုင်းတုံယမ်းနှင့်တကွ ထိုင်းအစားအစာ တို့သည် ထိုင်းတို့အတွက် ပါဝါအပျော့ဖြစ်သည်။ ထိုင်းအစားအစာတို့သည် ထိုင်းတို့ကို ဂုဏ်သတင်း၊ ချစ်ခင်ခြင်း၊ ငွေကြေး၊ အလုပ်အကိုင်တို့ကို ဆောင်ကြဉ်းပေး သည်။ မြန်မာမုန့်ဟင်းခါး နှင့်တကွသော စားဖွယ်သောက်ဖွယ် အပေါင်းကို လည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဦးမော့ချိန်၊ မြန်မာကို ကမ္ဘာက စိတ်ဝင်စားချိန်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒီရေတက်ချိန်တွင် စနစ်တကျ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးနိုင်လျှင် မြန်မာတို့အတွက် ပါဝါအပျော့နှင့်တကွသော အခွင့်အရေးများကို ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကော့သောင်းအကျဉ်းထောင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် နှိမ်နင်းမှု ၁ ဦးသေ၊ ၇ ဦး ဒဏ်ရာရ
9:12:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ကော့သောင်းမြို့က အကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းသားတွေ ထောင်ဖောက်ထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်
လုံခြုံရေးက ပစ်ခတ်ထိန်းသိမ်းရာမှာ အကျဉ်းသား ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၇ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။
မနေ့က ညနေ ၆ နာရီလောက်မှာ ကော့သောင်းအကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ အကျဉ်းသားတွေ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီး ထောင်ဖေါက်ထွက်ပြေးကြတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ မြို့ခံတစ်ဦးက RFAကို ပြောပါတယ်။
“သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ ဆေးရုံရောက်လာတယ်ပေါ့၊ ၈ ယောက်မှာ ၁ ယောက်သေသွားတယ်၊ ၇ ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်၊ ကော့သောင်းဆေးရုံကြီးမှာ တင်ထားတယ်၊ ၁ ယောက်ကတော့ အောက်ဆီဂျင် ပေးထားရတယ်လို့ ပြောတယ်ခင်ဗျ”
ဒဏ်ရာရသူတွေကို ကော့သောင်းမြို့ ဆေးရုံမှာတင်ထားရကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကော့သောင်းမြို့ရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ဖြေဆိုဖို့ငြင်းဆန်ပါတယ်။
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်တွင် စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေ SNDP...